XOG XASAASI: Ogow Sababta Dhuusamareeb loogu dilay ninkii la sheegay inuu hubeysnaa! | HalQaran.com
XOG XASAASI: Ogow Sababta Dhuusamareeb loogu dilay ninkii la sheegay inuu hubeysnaa!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa nin la sheegay in uu qori AK47 ku hubeysnaa oo xalay lagu dilay Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud
Ninkan ayaa la sheegay in uu ka tirsanaa Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed, iyadoo dhawaan loo soo bedelay Magaalada Dhuusamareeb, ka dib markii laga soo wareejiyay Magaalada Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan Booliska Magaalada Dhuusmaareeb ayaa saxaafadda u faah faahiyay waxa uu askarigaasi ahaa iyo sababta xilligan keentay in ay dilaan askar ka tirsan Saldhiga Booliska Dhuusamareeb.
Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciis Warbaahinta loo adeegsan ayaa yiri “Askarigan la dilay wuxuu ka tirsanaa Ciidamada Asluubta ee Dowladda Somaliya, dhawaan ayaa laga keenay Magaalada Muqdisho, oo loo soo wareejiyay Magaalada Dhuusamareeb.”
Waxa kaloo uu yiri “Askariga oo lagu magacaabi jiray Dhuubow Aadan Raage, sababta loogu soo wareejiyay Magaalada Dhuusamareeb waxay tahay in uu sidaasi codsaday Senator Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagey) oo ka tirsan Aqalka Sare, abti ayuuna u ahaa askariga.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Askariga ayaa abtigiis ka dalbaday in Magaalada Dhuusamareeb loo soo wareejiyo, maxaa yeelay wuxuu ku lahaa ceel iyo beer oo ku yaala agagaarka Garoonka Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb.”
Wuxuu intaa ku daray “Waxaan maqalnay ka hor intii aan xalay la dilin askariga inay is khilaafeen Senator Dhagey, khilaafkana wuxuu ka dhashay in uu diiday in uu wareejiyo masuuliyadda beerta iyo ceelka, isagana wuxuu rabay in uu iibsado, kuna laabto Magaalada Muqdisho oo qoys ay u degan yihiin. Intaas ka dib waxaan maqalnay in la dilay.”
Sarkaalkan oo arrintan xasaasiga ah sii faah faahinaya ayaa yiri “Askariga wuxuu doonayay in uu seexdo Saldhiga Booliska Dhuusamareeb oo mararka qaarkood uu seexan jiray, laakiin askartii heeganka ku qorneyd ayaa dishay. Illaa toddobo askari oo heeganka saarnaa ayaa hadda u xiran falkaasi.”
Askarta dilkan loo xiray oo ku xiran Saldhiga Booliska Dhuusamareeb ayuu Sarkaalkan sheegay in ay baarayan Saraakiisha Hay’adda NISA iyo Booliska Galmudug.
“Waxa shakiga dhaliyay waxaa weeye khilaafka iyo dilkiisa maxaa isku soo beegay? Awalba Saldhiga wuu imaan jiray isagoo qorigiisa wata, si uu u seexdo, maxaa hadda loo dilay? Saraakiisha Nabad Suggida iyo Booliska ayaa wada baaritaan la xiriira sababta loo dilay marxuum Dhuubow Aadan Raage.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sarkaalka Booliska Dhuusamareeb ka tirsan.
Dhuubow oo meydkiisa la geeyay isbitaalka weyn ee Dhuusamareeb ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu aasay khabuuraha ku yaala duleedka Magaalada Dhuusamareeb.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug ayaa hadalhaya dilka askarigaasi ay u gaysteen askar ka tirsan Booliska Saldhiga Dhuusamareeb.
Ninkii la sheegay inuu hubeysnaa
Ogow Sababta Dhuusamareeb loogu dilay;